Fursad malahan in dhagaha dhagta toosan ee Anker ee u dhawaaqo aad u wanaagsan lagu iibinayo 40 $ - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » heshiisyo Ma jiro wax fursad ah oo dhegta dhabta ah ee Anker-ka dhagaha ee codka fiican sida ugu wanaagsan lagu iibinayo 40 $ - BGR
Ma jiro wax fursad ah oo dhegta dhabta ah ee Anker-ka dhagaha ee codka fiican sida ugu wanaagsan lagu iibinayo 40 $ - BGR
Si aad u noqoto qof daacad ah, qiimaha 60 $ ee ku yaal Anker Soundcore Liberty Neo Run Wireless Bluetooth Earphones ayaa ka badan oo kaliya Badhannadaani cusubi waxay bixiyaan tayo tayo sare leh, nolosha batteriga weyn iyo xitaa baajinta codka, sida qalabka dhegaha la gashado oo aad afar jeer ku bixin lahayd. Iyada oo cadaalad ah sida qiimahani yahay, waxay ku saabsantahay Heshiisyada BGR. Marka waxaad ogtahay inaadan bixin doonin qiimaha tafaariiqda oo buuxa. Tag Amazon hadda oo waxaad ku iibsan kartaa lammaane kaliya $ 39,99!
Halkan waxaa ku qoran macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan bogga wax soo saarka:
Wadnaha sumadiisa ayaa ah astaanta maqalka ee Anker, saxiixkeena waxaa ka mahad celinaya in kabadan 10 milyan oo dadyow ah oo adduunka ah. . Xorriyada Neo waa qeyb ka mid ah taxaneheena Xoriyada ee telefishanka runta ee wireless.
Dareewallada ku habboon ee darandooriga u habboon: Annagoo ah jaangooyooyin kuyaal Graphene, waxaan u adeegsanay khibradeena inaan u abuurnay darawal cusub madax-weynaha Liberty Neo Bluetooth kaasoo si buuxda uga faa'iideysan doona waxyaabaha cajiibka ah. . 100 jeer way ka adag tahay birta iyo 35% ka fudud tan diaphragms-ka caadiga ah, waxay ku shaqeysaa si sax ah si ay muusikadaada u siiso heer dhawaaq balaaran oo leh saxnaan gaar ah iyo cad cad oo cad oo ku saabsan tirada inta jeer ee dhan.
Bass waad dareemi kartaa: soo-saaristeena BASSUP teknoolojiyada waxay falanqaysaa ku-celceliska hooseeya ee maqalkaaga waqtiga dhabta ah isla markaana isla markiiba waxay kordhisaa baastada ilaa 43%. Kaliya jooji dhageysiga muusikadaada oo aad bilowdid inaad dareento.
Isku xirnaanta aan burburin: anteenada LDS, oo laga soo qaatay teknolojiyada dayax gacmeedka, ayaa isku daraysa Bluetooth 5. 0 si aad u abuurto xiriir isku dhafan oo udhexeeya madaxaaga wireless-ka iyo aaladdaada, xitaa gudaha meelaha mashquulka ah. Duullimaadyo maleh, dhibic la'aan.
Culeys khafiif ah: Mid kasta oo ka mid ah miinooyinka Bluetooth wuxuu culeyskiisu yahay 0,2 kg. Si loo hubiyo khibrad aan lahayn daal, si kasta oo aad dhegeysato.
Toddobaadka dhageysiga awoodda leh: Iyadoo la adeegsanayo unugyada awoodda Anker Heritage iyo hufnaanta sare, Liberty Neo wuxuu bixiyaa wax ka badan saacadaha akhriska wirelesska ah ee '3,5' oo ah lacag hal mar ah iyo 9 saacado dheeri ah oo laga soo qaadayo dacwadda isugeynta.
Raac @BGRDeals on Twitter Si aad ula socotid waxyaabaha ugu dambeeyay iyo kuwa ugu guulaha badan adduunka. Tirada ayaa laga yaabaa inay koobnaato. Qiimayaashu waa isbeddelayaan ogeysiis la'aan iyo kuubannada ayaa dhici kara wakhti kasta. BGR waxay heli kartaa komishanka amarada lagu meeleeyay sheygan.
100 $ Instant Pot DUO60 waxay ku jirtaa qiimeheeda ugu hooseeya ilaa maalinta koowaad ee maalinta - BGR
Princesse Eugénie surprise: comment Princess est un grand fan de cette émission de télévision improbable
DADKA & LIFESTYLE3,159